I-Hippozino Ikhasino eku-inthanethi nokubuyekezwa kweselula
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-hippozino casino ku seleula naku inthanethi
Isibuyekezo se-Hippozino Casino ku seleula naku inthanethi
Isofthiwe:Betsoft, Microgaming, NetEnt, Play n GO, Pragmatic Play
Ibhonasi Lokukwamukela:Ibhonasi engu-100% kuze kufike ku-R3000
25 Bhonasi Lokwamukela
I-Hippozino Casino iyikhasino ledijithali enezilwane zasendle ngonyaka we-2013. Kodwa-ke, ukwakheka kwepulatifomu yokudlala akukude nokuba luhlaza. Abafikayo abasha babingelelwa yi-run-of-the-mill website, ethi ibe nezinguquko eziqala ngemuva kokuvula i-akhawunti. Iphaneli lesikhungo lilawula ikhasi le-akhawunti ngemibala yalo e-purple ephilayo kanye ne-reel slot isiyingi, enesondo le-roulette kububanzi. Elinye ikhasi lithathwa yimifanekiso ejwayelekile yemidlalo.
IHippozino Casino inemidlalo engaphezu kuka-850 evela kunhlanganisela yezitudiyo zemidlalo ezinhle ezifana neMicrogaming, Rival, NetEnt, Evolution, BetSoft, Big Time Gaming, ne-Play ‘N Go, njll. Ungadlala ama-classic namavidiyo we-slots, kufaka phakathi ama-jackpots aqhubekayo, imidlalo yetafula, i-video poker, imidlalo engajwayelekile, nekhasino ebukhoma. IHippozino Casino ibingelela amalungu amasha ngephakethe lokwamukela elikhangayo ngenkathi amalungu akhona engazuza ebangeni elithile lokukhushulwa okuvamile, kufaka phakathi uhlelo lwemiklomelo olunamandla.
Ikhasino linerekhodi eliqinisekisiwe elingaphezu kweminyaka eyishumi. IHippozino inikeza indawo yokudlala efanelekile nephephile, lapho amalungu ejabulela ukuzijabulisa kwe-stellar ngaphandle kokukhathazeka okungaphandle. Yonke imidlalo ihlolwa njalo futhi iqinisekiswe ngemiphumela yemidlalo ekhiqizwe ngokungahleliwe. Ukucwaninga kubuye kufakazele ukuthi amaphesenti wokukhokha we-opharetha asezingeni elamukelekayo. Imininingwane yamalungu ivikeleke ngokuphelele ngemuva kwezicishamlilo ezi-encrypted ezisezingeni lomkhakha. Indawo enobungani beBitcoin inewebhusayithi yaseNingizimu Afrika ngakho-ke ake sibone ukuthi yini enye ikhasino engayinikeza amaReeboks.
2021 Amamkhodi Webhonasi Yokwamukela e-Hippozino Casino
Idiphozithi yokuqala I-100% ibhonasi efinyelela ku-R3,000 kanye ne-25 spins yamahhala
Ama-spins wamahhala azodlalwa ku-Book of Dead. Isamba sebhonasi kufanele sibhejwe amahlandla angama-50 ngaphambi kokuthi ama-winner akhishwe. Ukunqoba kwamahhala kunophahla ka-R400, kepha kungahoxiswa ngemuva kokudlala okujwayelekile okuphindwe ka-50 inani lempumelelo.
2021 Amakhodi Ebhonasi Andingi Dipozithi e-Hippozino Casino
IHippozino Casino ayinikezeli ngekhodi yediphozithi ngalesi sikhathi.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Hippozino Casino
Double Delicious Amabhonasi amangazayo ahanjiswa ngqo ebhokisini lakho lomilayezo; ungadlala ngayo kabili.
Cashback Weekends UHippozino ubhala kuze kufike ku-15% woku kulahlekelwa komuntu ngezimpelasonto. Idiphozi encane ingu-R400.
Rest & Relaxation Ungalindela amabhonasi athile ahehayo ebhokisini lakho leposi ngezimpelasonto. Ungazifuna 3x.
Sunday=Funday Ibhonasi engu-20% efinyelela ku-R10,000 ngamaSonto. Ungadlala ngebhonasi amahlandla awu-2.
Saturday Spinner I-10 spins yamahhala ongayidlala ku-Aloha! I-Cluster Ikhokha njalo ngoMgqibelo.
Rewards Program Thola amaphuzu ngayo yonke idiphozi, bese ukhuphuka ngamazinga ukuthola amalungelo akhethekile
Ukufaka izicelo sokubuyiswa kwezimali eziphumile ngempelasonto, amalungu kumele ngabe enze idiphozi encane engu-R500. Amadiphozithi kumele yenziwe ngekhodi ethi ‘MARKER’ yemidlalo ye-roulette. Abadlali be-non-blackjack nemidlalo ebukhoma kufanele basebenzise ikhodi ethi ‘DEALER’. Ikhodi yekhuphoni yebhonasi ye-Funday ithi ‘SUN’, kuyilapho eyeMigqibelo iSpinner ithi ‘PLAY’ – idiphozi encane yalokhu okugcina ingu-R200. Inani lediphozithi kanye ne-spins yamahhala kufanele ibhejwe izikhathi ezingu-50 ngaphambi kokudliwa ukuwina.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi e-Hippozino Casino
Ukudlalela imali noma ukuzijabulisa e-Hippozino Casino, udinga ukuvula i-akhawunti, engenziwa ngezinyathelo ezimbalwa ezilula. Chofoza ku-‘Bhalisa ‘ngakwesokudla phezulu kwesikrini, bese ufaka i-ID yakho ye-imeyili. Kuzofanele futhi ukhethe iphasiwedi yakho nemali oyodlala ngayo.
Kuphoqelekile ukwamukela Imigomo Nemibandela kanye nenqubomgomo yobumfihlo ngaphambi kokuba ubhaliswe. Kubalulekile ukuthi ufunde kokubili ngaphambili. Kufanele ube neminyaka eyi-18 yokudlala e-Hippozino Casino. Kwenye ingxenye yefomu udinga ukufaka imininingwane yakho siqu njengoba kuceliwe.
Ngemuva kwalokho, ungangena ngemvume njalo usebenzisa iziqinisekiso ozikhethile ngesikhathi sokubhalisa. Ukugcwalisa i-akhawunti yakho, iya ku-Cashier bese uqhafaza ku-‘Dephosit ’. Khetha indlela yakho yokukhokha nge-e-payment, bese ufaka imininingwane yakho yasebhange. Faka inani lediphozi, uhambise, bese ufuna ibhonasi yakho.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala eHippozino Casino
I-Hippozino Casino ine-quotient yokuzijabulisa ephezulu kakhulu. Umtapo wolwazi wemidlalo uqukethe imidlalo yekhasino ethandwa kakhulu edlalwa kumakhasino edijithali emhlabeni jikelele. Le midlalo ihlinzekwa yi-elite consortium yama-studio angu-60 ahlonishwa kakhulu emidlalo. Abanye babathuthukisi abaziwayo bahlanganisa iThunderkick, 1 x 2 Gaming, Imidlalo ekhulayo, Blueprint Gaming, Ezugi, Habanero, Iron Dog Studios, Kalamba, Tom Horn, Spinomenal, kanye ne-Just for the Win, njll.
Umtapo wezincwadi wamageyimu uhlala ngaphansi kwesibhengezo esikhulu futhi uhlukaniswe ngezigaba zemidlalo ngayinye. Ikhasino liphakamisa imidlalo ongahle ube nentshisekelo kuyo ngezigaba ezinjengokuthi ‘Okufakiwe’ ngenkathi ungangeza imidlalo oyithandayo esigabeni esithi ‘Izintandokazi’ ukuze ufinyelele kalula kamuva. Indawo yokwamukela izivakashi etafuleni ibizwa ngokuthi ‘iCasino’, ngoba iyimidlalo yakuqala yasekhasino. Ukukhetha imidlalo, ungapheqa ngezigaba noma useshe izihloko ezithile. Abadlali abakhetha izitudiyo ezithile bangabathola ngaphansi kokuthi ‘Bonke Abahlinzeki’. Nakhu ongakubheka izigaba zemidlalo ehlukile:
I Slot Lover’s Paradise
I-Hippozino Casino yindawo okufanele ube kuyo uma ungumlandeli wezikhala ovela eNingizimu Afrika. Kukhona ama-reels kukho konke ukuthanda nokuncamelayo. Izazi zendabuko zizizwa zisekhaya ngokuzikhethela okubanzi kwezindawo zakudala, abathandi be-video slot bakuthola kunzima ukukhetha phakathi kwezinhlobo eziningi zezinhlobo zezilwane ezifana nefantasy, mythology, horror, animals, njll. Ezinye ‘Izintandokazi’ zifaka i-Immortal Romance, Starburst, Aloha! ICluster Pays, amaVikings Unleashed Megaways, The Dog house Megaways, nabanye abaningi.
Sebenzisa Amakhono Akho Lapho Bakhokha khona
Imidlalo efana ne-blackjack, i-poker ne-roulette ayinasikhathi. Le midlalo yabeka izisekelo zamakhasino okuqala wezitini nodaka, futhi ubuhlanya babo buyaqhubeka ezindaweni zedijithali. Imidlalo yamakhadi iletha izinselelo ezijabulisayo, futhi iphinda inikeze ezinye zezingqinamba ezinhle kakhulu. IHippozino Casino inendawo yokwamukela izivakashi enkulu yale midlalo, enezihloko ezinjengeVegas Strip Blackjack, iBaccarat, iTexas Hold ‘Em Bonus, i-Three Card Rummy, i-European Roulette: Kubhengezwe Ukubheja, ne-3D American Roulette, njll.
I-Gaming nge-Social Dimension
Akubona bonke abadlali abanelungelo ngokwanele lokuzwa ubukhazikhazi nenjabulo yeVegas noma iMacau. Imidlalo yabathengisi ebukhoma ilingisa ukuma kwamakhasino wangempela, abadlali abangakujabulela emakamelweni abo okuhlala, noma ekuhambeni. Abadlali bangabuye bahlanganyele nama-croupiers nabanye abadlali. Ngakho-ke, jika ematafuleni ‘wangempela’ ngemidlalo efana ne-Infinite Blackjack, Texas Hold ‘Em Extreme, Aladdin Baccarat, Speed ​​Andar Bahar, standard Backgammon, Arabic Roulette, Turkish Roulette, neJapan Roulette, njll.
I-Chuck Poker Face
Ukudlala i-poker yamakhadi ama-5 kuma-consoles afana ne-slot akudingi amakhono amaningi we-poker, kepha ungawina imali enhle uma ukwazi ukuhlola izingqinamba. Ukwenza izinto zibe ngcono, i-video poker nayo inomphetho wendlu ophansi. Zonke izihloko zingena ngamunye futhi ne-multihand, ngakho-ke abadlali abathandekayo bangaphokophela phezulu kakhulu. Izinhlobo ze-poker yevidiyo zitholakala esigabeni ‘seCasino’. Izihloko zifaka ama-Jacks noma i-Better, i-Bonus Deuces Wild, i-Aces nobuso, i-Double Bonus Poker, i-Triple Double Bonus Poker, ne-Joker Poker, njll.
Imidlalo ye-Arcade nama Scratchcards
Imidlalo ye-Arcade yayithandwa kakhulu ezindaweni zomzimba ngeminyaka yama-70s nama-80s, futhi kwakubonakala sengathi iphelelwe yimfashini kwaze kwaba yilapho izindawo zeGaming zingenisa i-craze online. Ngisho namakhadi wesitayela selotho asethuthele ku-inthanethi. IHippozino Casino ayinayo indawo enkulu yokwamukela izivakashi yale midlalo engajwayelekile, kepha abadlali bangajabulela iPachinko, Wheel of Luck, Lost Vegas Zombie Scratch, The Incredible Balloon Machine, The Poke Guy, neCricket Star Scratch, phakathi kweminye.
Hlela izinzuzo ezinkulu ze-Progressive Jackpots
Iningi labahlinzeki bemidlalo e-Hippozino Casino linamanethiwekhi abanzi ama-jackpots aqhubekayo, lapho abadlali babheja khona kanyekanye kusuka zikhathi zonke. Ama-jackpots ale midlalo ajwayele ukufaka izibalo ezi-4, 5, no-6. Ngeshwa, awusoze waba ngusozigidi ngobusuku obubodwa eHippozino, kepha ungathemba ukuwina okukhulu ngemidlalo efana neTreasure Nile, iGunslinger Reloaded, iCash Splash, iCai Shen Dao, Ofunda nabo abangenacala, AmaDragons amathathu, iHlonipho yaseSparta, Izithelo Poppers, neBell of Fortune, njll.
I-Hippozino Mobile Casino: I-Hippozino Casino iqhathanisa kanjani neselula?
I-Hippozino mobile casino ifana nokuzijabulisa nokusebenziseka kwekhasino le-PC, uma kungekho okunye. Kubukeka futhi kusebenza njengepulatifomu ye-PC, gcina ezinye izinguquko ezincane ukuze zivumelane nesikrini esincane. Amathebhu ‘Okubhalisa’ kanye ne ‘Log In’, kanye ne-‘Promotions ‘ne-‘Support izigaba zihlanganiswe zaba yimenyu ye-hamburger futhi zabekwa ngaphezulu kwesobunxele. Umtapo wezincwadi wemidlalo ugcina indawo yawo ngaphansi kwesibhengezo, kepha kufanele uskrolele ngokuvundlile ukusuka kwesokudla uye kwesobunxele.
Ikhasino elihambayo nalo limile mpo, ngoba opharetha uzigcinile zonke izinto zewebhusayithi yangempela. Imodi yokwakheka kwezwe iyindlela engcono kakhulu ongayidlala usohambeni; imidlalo eminingi ephathekayo inesakhiwo esivundlile, futhi ungakwazi nokuzungeza ngesithupha sakho, ngaphandle uma uyi-southpaw. Ungadlala iningi lemidlalo ekuhambeni, kufaka phakathi izimbiza ze-9 pots of gold, i-Rich Wilde kanye ne-Book of Dead, i-Fruit Shop Megaways, i-Age of Conquest, i-Vegas Strip Blackjack, i-Fishermen Gold, neminye.
Ngingayidawuniloda i-Hippozino Casino kuselula yami?
I-ippozino Casino ihlehlela emuva esikhathini lapho yayingekho i-casino eku-inthanethi eyayiphelele ngaphandle kohlelo i-app khasino. Ukusungulwa kungahle kube nezici ze-app lokusebenza lwekhasino le-PC ngaleso sikhathi, kepha akusasebenzi. Le ndawo ayinayo ngisho nohlelo lokusebenza lweselula. IHippozino iyiwebhusayithi yokudlala esheshayo, engafinyeleleka ku-inthanethi.
Izindlela Zokukhipha Noku Diphozitha Imali Ezamukelwe e-Hippozino Casino
Visa Yebo Yebo Izinsuku ezingu2-3
MasterCard Yebo Yebo Izinsuku ezingu2-3
Maestro Yebo Yebo Izinsuku ezingu2-3
EcoPayz Yebo Yebo Izinsuku ezingu2-3
Much Better Yebo Cha -
Instant EFT Yebo Yebo Amahora angu-24
WebMoney Yebo Yebo Izinsuku ezingu2-3
Interac Combined Yebo Cha -
AstroPay Yebo Yebo Amahora angu-24
Trustly Yebo Yebo Izinsuku ezingu1-2
Bank/Wire Transfer Cha Yebo Izinsuku 4-7
Kusungulwe: 2013 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Opherethwa ngu: Muchogaming N.V. E-mail: Ifomu lewebhu ekhasini lokusekela
Iselula: Yebo Ukuxhaswa ku-24/7/365: NA
Ayikho inguqulo Yokudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha!
Ubuhle Nobubi be-Hippozino Casino
Umtapo wolwazi omkhulu futhi ohlukahlukene
Ama-lobbies wemidlalo wezitudiyo eziphezulu
Ibhonasi yokwamukela ekhangayo
Ukukhushulwa njalo nohlelo lwemivuzo
Isipiliyoni sekhasino yangempela
Ama-jackpots aqhubekayo amakhulu
Ukusekelwa okugcwele kwe-ZAR
Indawo enobungani be-Bitcoin
Ikhasino elayisensiwe nelilawulwayo
Ayikho inqubekela phambili eyizigidi zamadola
Yini Eyenza I-Hippozino Casino Ukhethe Oluthandwa Ngabadlali BaseNingizimu Afrika?
Ukusungulwa okulungele iNingizimu Afrika
Icebile futhi iyahlukahluka kulabhulali yamageyimu kusuka konjiniyela abaphezulu
Uhlelo lokwenyusa njalo nokwethembeka
Iqoqo elibonakalayo lemidlalo yomthengisi ebukhoma
Ama-jackpots aqhubeka ngamathikithi amakhulu
Amakhasino alungele i-Bitcoin
Indawo enelayisensi futhi elawulwayo
Izikhalazo zase-Dream Palace Casino yase Ningizimu Afrika
Ayikho inqubekela phambili yesigidi-kuyaphezulu
Ukusekelwa kwebusku nemini akutholakali
Ngabe i-Hippozino Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Ukugembula okuku-inthanethi akukho emthethweni eRainbow Nation futhi izindawo ze-iGaming azivunyelwe ukunikeza izakhiwo zazo kubahlali baseNingizimu Afrika. Kodwa-ke, le mithetho ayinamandla okuphatha izikhungo ezingasolwandle. Ngenxa yalokhu, abakwaReebok bangaphumula enduduzo yokuthi iziphathimandla azibhekisi izakhamizi ezidlala kumakhasino aku-inthanethi abhaliswe phesheya kwezilwandle.
Ngikhipha Kanjani Imali kwi-Hippozino Casino?
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho bese uqinisekisa ukuthi awunazo izibopho zokudlala okulindile. Futhi hlola ibhalansi yakho – uma konke kuhamba kahle, iya ko-cashier. Chofoza ku-‘Withdraw ‘bese ukhetha indlela yokukhokha oyithandayo. Faka imininingwane yakho yasebhange, nemali ofuna ukuyikhipha, bese uyithumela. Uzothola i-imeyili eqinisekisa ukwamukelwa kwesicelo sakho sokokhipha imali.
Yini i-Hippozino Casino?
I-Hippozino Casino iyikhasino ledijithali, lapho ungadlala khona imidlalo ngemali yangempela. Yethulwe ngo-2013, i-casino inikeza umtapo wolwazi omkhulu futhi oyindida, lapho amalungu ajabulela khona imidlalo yama-slot, kufaka phakathi ama-jackpots aqhubekayo, imidlalo yetafula, i-video poker, i-casino ebukhoma, nemidlalo yesitayela se-arcade. Le midlalo itholakala kubhethri lama-studio aphezulu afana neMicrogaming, Rival, NetEnt, Evolution, neBetSoft, njll.
Le ndawo isebenzisa ukukhushulwa okuhlukahlukene ukuheha amalungu nokuwagcina edlala. Lokhu kufaka imiqhudelwano eminingana eyenziwa yiHippozino Casino njalo; kukhona nohlelo olujwayelekile lwemivuzo. Indawo enobungani beBitcoin inikwe ilayisense eCuracao, futhi inikeza ipulatifomu ephephile. Ikhasino yemukela abadlali abavela kuRainbow Nation ngenguqulo yewebhusayithi ezinikele nokusekelwa kweZAR.
Ubani Ophethe i-Hippozino Casino?
I-Hippozino Casino iqhutshwa nguMichogaming N.V., ebhaliswe e-9 Abraham de Veerstraat, eWillemstad, eCuracao.
Ngabe i-Hippozino Casino inezici zokubheja kwezemidlalo
Cha, iHippozino Casino ayinayo incwadi yezemidlalo.
Ngabe i-Hippozino Casino inikela ngohlelo lwe-VIP?
I-Hippozino Casino inalokho ekubiza ngokuthi yi-Rewards Program. Abadlali bathola amaphuzu omvuzo kuyo yonke idiphozi; amalungu kufanele aqoqe amaphuzu ukukhuphuka ngamazinga, futhi athole imivuzo ekhethekile.
Yiziphi Izidingo Zokubheja e-Hippozino Casino?
Amanani ebhonasi nokunqoba kwamahhala kufanele kubhejwe ngokuzimela izikhathi ezingu-50 ngaphambi kokuwina kungakhishwa.